Soo dejisan Cent Browser 4.0.9.112 Standard... – Vessoft
WindowsInternetkaDareemaha WebkaCent Browser
Bogga rasmiga ah: Cent Browser
Cent Browser – browser ah oo ku salaysan mashiinka Chromium oo wax laga bedelay sifooyin aan caadi ahayn. Software wuxuu ka kooban yahay dhammaan qalabka muhiimka ah, guddi leh jaantusyo muuqaal muuqaal ah, xawaaraha shaqada oo sare, bar baaritaan badan iyo habab kale oo loogu talagalay surfing webka. Waxaad maareyn kartaa Browser-kaaga adigoo isticmaalaya qalab kuleyliyaha ah oo si sahal ah loogu daro isku-dhafan cusub, ama jumladaha muraayadaha si sahal ah u gali karaan hawlaha lagama maarmaanka ah iyo isticmaalka habboon ee tabs badan. Software waxay kuu ogolaaneysaa inaad internetka ku dhexjirto qaabka khafiifka ah oo aan wax raadin ah oo ku saabsan ficilada isticmaalaha ee shabakada iyo goobaha booqashada si qarsoodi ah. Cent Browser wuxuu awood u leeyahay in uu dhaqaajiyo qaybaha gaarka ah si loo yareeyo isticmaalka khayraadka kombiyuutarka iyo xasuusta nadiifinta si toos ah, kaas oo hagaajinaya waxqabadka guud ee browser. Waxaa sidoo kale jira fiilooyin badan oo loogu talagalay Cent Browser kaasoo kobcin kara barta internetka oo leh hawlo cusub ama kordhiya kuwa jira.
Maaraynta miisaanka la isku haleyn karo
Ilaalinta gaarka ah ee ilaalinta
Dhaqdhaqaaqa Mouse iyo furayaasha kulul
Soo dejisan Cent Browser
Faallo ku saabsan Cent Browser
Cent Browser Xirfadaha la xiriira
BearShare – barnaamij faylal wadaagis ah oo lagu raadiyo oo lagu soo dejiyo faylasha warbaahinta. Softiweerku wuxuu ka kooban yahay mashiinka raadinta awooda leh si dhaqso leh looga helo feylasha lagama maarmaanka ah.